Ogaden News Agency (ONA) – God Dheer ha qodin ku dhiciweydaa Ma ogide! Ethiopia oo rabta inay xidho Barnaamijka Ilays ayaa iska Jam gareysay 3 TV oo ay Iyagu lahaayen iyo ArabSat.
God Dheer ha qodin ku dhiciweydaa Ma ogide! Ethiopia oo rabta inay xidho Barnaamijka Ilays ayaa iska Jam gareysay 3 TV oo ay Iyagu lahaayen iyo ArabSat.
God ha qodin Hadaad Qodidna ha dheerayn ku dhici Doontida Ma Ogide. Ayay dadka Somaliyeed isugu maah maahaan. Hadaba godkii ay qoday dolwada Ethiopia oo ahaa in ay Barnaamijyada Tv-ga ilays ku hor istaagaan waxa ay sababtay in Ethiopia ay ku dhacdo godkii dheera. Waxay weyday 3 TV oo kala ahaa Ethiopian TV 1,2, iyo 3 kadib markii ay Jam ku sameyeen Arab Sat.. Waxaana ku socda dacwad oo Arab Sat iyo Lubnaan ayaa dacwo ku ogay.
Ilays TV: (Europe)
Dowlada Ethiopia waxa ay geed dheer iyo ku gaabanba u fuushay sidii ay ku hor istaagi lahayd Barnaamijka ilays oo ah Barnaamij-TV oo todobaadle ah oo ka xogwarama xaalada dhulka iyo shacabka somalida Ogadeniya.
Barnaamijkan Ayaa si tijaabo ah looga billaabay dhamaadkii sanadkii 2010 Xarunta Somali Channel TV ee wadankaUK. Waxa uuna soo gali jiray bilowgisi hore Sep- December 2010 Habeekasta oo Jimce ah 8PM- 9pm. Waxa sanadkii 2011 loobadalay habeenka Khamiista ah 8-9 fiidnimo ee saacada London. Barnaamijkan oo ahaa todobaadle waxa si dhexdhaxaada oo waafaqsan saxaafada uu uga xog warami jiray dhacdooyinka iyo wararka la xidhiidha Dhulka ogadeniya iyo dhaqdhaqaaqa Somalida Ogadeniya ee kusugan Qurbaha.
Barmaaijkaas oo ahaa mid lagu tijaabinayay in la hirgalinkaro TV laguna qiimeynayo baahida ay bulshada Somalida Ogadeniya u qabto inay helaan TV ay u madaxbanaanyihiin ayaa noqday mid lagu guulaystay oo laga gaadhay danihii lagarabay. Waxa uuna noqday Barnaamijka ugu caansan ee ku baxa Af Somali iyada oo habeenkaas ay daawan jireen dad u dhexeeya hal million iyo badh ilaa laba million oo daawadayaal ahi. Waxa uuna ka socday Somali channel 7 Bilood oo Tijaabo ahaa.
Ilays TV (East Afrika)
Hadaba Guumeysiga Ethiopiaayaa ka argagaxay saameynta uu keensaday Barnaamijkaas oo ahaa saacad waxayna billaabeen in ay iskudayaan goobkasta oo uu barnaamijkaas ka baxo inay ku ridaan khalkhal oo hawada ay ka saaraan.
Wajigii labaad ee tijaabada barnaamijka Ilays oo ahaa mid laga hirgalinayo Geeska Afrika innuu xarumo ku yeesho ayaa laga billaabay Eri-TV oo ahaa TV uu leeyahay wadanka Eritrea. Barnaamijkan ayaa noqday mid geeska Afrika aad looga daawado waxa uuna kor u qaaday tayadii barnaamijka iyada oo si toos ah geeska Afrika looga soo gudbinayay waxaana kor u kacay daawadayaasha barnaamijkan oo gaadhay 3 Million ilaa 4 Million oo dad ah oo si gaara uga daawanayay Geeska Afrika. Waxa uu soogala 30 daqiio Maalinka Arbacada ah 4:00- 4:30 Galabnimo saacada bariga Afrika.
dowlada Ethiopia oo lacag malaayiin dollar ah kusoo kireysatay khubaro Chinese ah soona gattay qalabka lagu raaco hawada ee lagu jam gareeyo Sateliteka ayaa waxay isku dayeen inay Dhulka Hoose ka raacaan “Transmission-ka upperlink ee ku xidhaya TV-ga sateliteka. Ethiopia waxay garan kari weyday in haddii ay raacaan Upperlink in ay jam-gareynayaan TV-gooda balse aysan jam gareyn doonin kaliya midka Eri-TV.
Waxaana halkaas lacagtii badneyd ee malaayiinta aheyd ay dowlada Ethiopia kharash gareysay keentay inay Jaam gareyso 3 TV oo ay iska lahaayen iyo laba TV oo laga lahaa Eritrea. Sidoo kale waxay jam gareyeen oo TV-yo kale oo laga laha wadamada Carabta Sida-kan Lubnaan. Ethiopia waxay weyday TV-gii wadankooda, lacag malaayiin ah oo kaga baxay khubaro bilaash ah iyo lacag kale oo ganaax ah oo dib loogusoo furay in markale hawada ku soo galaan. Eegana waxaa ku socda Dacwad ay kusoo wada oogeen wadanka Eritrea, Lubnaan iyo maamulka Arab Sat.
Su Aashu waxa weeye Ethiopia ma joojisay Barnaamijka Ilays?
Waa maya Eri TV waxa uu markiiba bilaabay innuu howshiisii kasii socoto Nilesat oo ah satellite laga leeyahay wadanka Masar. Dadkii daawanayay Barnaamijka Ilays sidoodii ayay u daawanayeen mowjada ayuunba iska badashay.
Eri TV hadda waxa uu hawada Arab sat kuso noqday todobaadkii hore, sidoo kale TVyadi saddexda aha ee Ethiopia waa ay kuso laabteen.
Jinkii Ethiopia ku jiray- Saacad badhkeed ayuu ku gubtay ee maxaad u maleyn 24 saac oo lagu kor eedamo!